Telemedicine - Proton any California
Telemedicine ao amin'ny Ivontoerana fitsaboana fitsaboana momba ny homamiadana any California
Fantatsika fa ny fitsangatsanganana mandritra ny areti-mifindra COVID-19 dia mety tsy hahomby amin'ny sasany. Amin'ny alàlan'izany ao an-tsaina, dia nanatanteraka safidy telemedicine isika mba hahafahantsika manohy manolotra serivisy ho an'ireo marary efa misy sy mety ho azontsika. Raha toa ka misy tombony ny tombony, ny telemedicine dia manome lalana ahafahana mitsena ny marary antsika. saika miresaka momba ny fitsaboana proton no safidy fitsaboana mety.
Ny Telemedicine dia tsy manolo tanteraka ny ilain'ny marary mitsangatsangana any California Proton hotsaboina, saingy mamela anao hihaona aminao izahay mba hanazava momba ny fitsaboana protonon ho an'ny toe-javatra manokanao, hamaly ireo fanontaniana, ary averina jerena ny dingana manaraka.
Rehefa tonga ny fotoana hitsidihan'ny Ivotoerana anay, tianay antoka fa handray tsara ny fepetra hitandrina ny marary sy ny mpiasa izahay mandritra ny aretin'i COVID-19. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fepetra fisorohana ataontsika Pejy fampahalalam-baovao COVID-19.
Vantany vao niantso ny Ivotoeranay ianao mba hisoratra anarana ho marary vaovao, dia hiantso anao ny mpandrindra klinika anao haka ny tantaram-pitsaboanao sy hamaritana hoe inona no ilaina. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipan'ny fiantohana dia hanombatombana ny politikanao manokana amin'ny fiantohana ary hijerena azy aminao mba hahafantaranao izay misy ny fandrakofana.
Raha vao voaray daholo ireo rakitsoratra ara-pitsaboana rehetra dia hahazo antso hanangana fifampidinihana amin'ny alàlan'ny telemedicine ianao. Io fifampidinihana io dia manamora ny serivisy telemedicine mifehy sy hasiana HIPAA. Talohan'ny fanendrena telemedicine dia hisy hiantsoana anao hahafantatra ny fomba hidiran'ny serivisy alohan'ny fotoana iasanao amin'ny dokotera.
Mangataka ny fifampidinihana dia afaka miantso anay mivantana amin'ny 858-549-7400, alatsinainy ka hatramin'ny zoma, 8 maraina ka hatramin'ny 5 hariva PST. Na, afaka mangataka antso avy amin'ny ekipanay ianao amin'ny famenoana ny fangatahana fangatahana fangatahana.